सुन बेच्नेभन्दा किन्ने ग्राहक बढे ! एकै दिन तोलामा ३ हजारले घट्यो मुल्य, तोलाको कति ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
सुन बेच्नेभन्दा किन्ने ग्राहक बढे ! एकै दिन तोलामा ३ हजारले घट्यो मुल्य, तोलाको कति ?
काठमाण्डौँ । साताको अन्तिम दिन आज शुक्रवार सुनको मुल्यमा भारी गिरावट आएको छ । हिजो बिहीबार ८१ हजार ५ सयमा कारोबार भएको सुनको मुल्य आज शुक्रवार प्रतितोला ७८ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महाँसघले जनाएको छ ।
तेजावी सुन प्रतितोला ७८ हजार २ सयमा कारोवार भइरहेको छ । त्यस्तै,चाँदीको मुल्यमा पनि गिरावट आएको छ । चाँदी बिहीबारको तुलनामा ४० रुपैयाले घटेर प्रतितोला ८ सय २० रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।श्राेत khabarcenter